Hogaamiyaha Shabaab oo Doorashooyinka ka Hadlay
Hogaamiyaha Shabaab ayaa ugu baaqa dadka soomaaliyeed inay ka fogaadaan Doorashooyinka.
Sheekh Mukhtaar C/raxmaan Abu Zubeyr ayaa Fariin Maqal ah oo uu u qeybiyay Warbaahinta Muqdisho kaga hadlay Arimo dhowr ah oo ay ka midyihiin Doorshooyinka Dimoqoradiyada ku saleysan isaga oo ugu baaqay dadka soomaaliyeed inay ka fogaadaan doorashooyinka loo qabanayo oo aysan ogalaanin wa x aan aheyn ku xukunka shareecada islaamka oo ah mida kaliye ee wadanka lagu hogaaminkaro.
Hadalka Abu Zubayr ayaa ku soo beegmaya iyada oo maail ay ka dhimantahay doorashooyinka madaxnimada ee Somaliland.
Hogaamiyaha AL Shbaab ayaa ka faalooday Dimuqraadiyada isaga oo aad u dhaleeceeyay
Hase ahaate sida uu sheegayo Mohamoud Sheekh Ahmed Dalmar ah aqoonyahan ku xeel dheer culuumta islaamka ayaa tilmaamay in Islaamku dhigayo in dadku ay doortaan soona xushaan cidda ay madaxda ka dhiganayaan.
Abu Zubeyr ayaa dhanka kale sheegay inay jiraan dhaqdhaqaaqyo Islaami oo hogaamiyayashoodu markii hore ay ku baaqi jireen kor u qaadista shareecada islaamka iyo ku dhaqankeeda balse ay ka leexdeen wadadii toosneyd haatana ay ku mashquulsanyihiin sidii ay u fulinlahaayeen Mashaariicda hay’adaha shisheeye iyaga oo ka cabsi qaba in lagu daro liiska argagixisada .
Hadalka Abu Zubayr ayaa ku soo hagaagay iyada oo uu jiray khilaaf isa soo taraya oo u dhexeeya Xizbul Islaam oo ay xulifo ahaayeen, kuwaasi oo dhawaan ka baxay fadhiismo ay ku lahaayeen magaalada Beledweyne oo ay haatan ku suganyihiin Al Shbaab, sidoo kale waxaa jiray ciidamo ka tirsan Xizbul Islaam oo u goostay dhinaca Al Shabaab.
Sheekh Mukhtaar C/raxmaan Abu Zubeyr ayaa Fariin Maqal ah oo uu u qeybiyay Warbaahinta Muqdisho kaga hadlay Arimo dhowr ah oo ay ka midyihiin Doorshooyinka Dimoqoradiyada ku saleysan isaga oo ugu baaqay dadka soomaaliyeed inay ka fogaadaan doorashooyinka loo qabanayo oo aysan ogalaanin wax aan aheyn ku xukunka shareecada islaamka oo ah mida kaliye ee wadanka lagu hogaaminkaro.